Ahoana ny famonoana ny fanavaozana ny orinasanao | Martech Zone
Alarobia, Novambra 17, 2010 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Androany hariva aho dia tao anaty adihevitra mafana niaraka tamin'ny mpanoro ahy iray. Tsy nahagaga raha nafana aho… tsy ny mpanoro lalana;). Ny fototry ny fifanakalozan-kevitra dia orinasa iray izay samy liana aminay. Ny ahiahiko amin'ilay orinasa dia izy ireo tsy manatitra amin'ny fampanantenan'ny vahaolana. Ny heviny dia ny mino fa samy izy roa ireo zava-baovao ary nahita fahombiazana tamin'ny fakana ny mason'ireo mpanentana lehibe eo amin'ny sehatry ny asa.
Ny fanavaozana dia be loatra. Ny tanjonao dia tsy tokony ho izy zava-baovao, ny tanjonao dia tokony ho ilaina. Lahatsary: ​​Avy 37 famantarana, Jason Fried amin'ny fanavaozana
Alohan'ny hipoahan'ny lohanao… ilaina afaka manaova zava-baovao. Fa ny hoe manaova zava-baovao dia tsy midika foana izany ilaina. Ny orinasa resahina eto dia rafitra fitantanana atiny izay manamora ny famoahana sy ny fandaminana ny atiny ary koa ny fanatsarana ny motera fikarohana. Sehatra mafy vato misy fotodrafitrasa tsy mampino. Atsipazo amin'izany ny ekipa mpanoratra atiny ary afaka mamoaka tsy misy ezaka izy ireo.
Ny olana dia, matetika, ny atiny dia tsy nohatsaraina. Ny mifanohitra amin'izany no izy, misy elanelam-bidy lehibe amin'ny fanatsarana izay mampihena ny vintana ho an'ny atiny ho voatanisa araka ny tokony ho izy amin'ny motera fikarohana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny sehatra dia tsy ilaina.
Niaiky ny mpampianatra ahy fa sahirana izy ireo rehefa apetraka ao amin'ny efitrano miaraka amin'ireo bandy SEO avy amin'ireo orinasa ireo. Mazava ho azy fa izany no izy! Fa maninona no gaga izy? Raha tsy mahita ny sasany amin'ireo singa fototra amin'ny fanatsarana ny lampihazo ianao dia ho very ny varotra amin'ilay bandy SEO anatiny isaky ny mandeha. Ary tokony.
Ny fifantohan'ny orinasa dia ny momba ny celeb amin'ny Internet manaraka hampiantrano webinar iray, mpitarika indostrialy hiarahany miasa, mpanoratra hampiroborobo ny orinasa, influencer iray handoa vola, na endrika vaovao hananganana fanantenana. Raha ny fahitako azy marina dia mino aho fa fandaniam-potoana sy herinaratra ary… vola ny tetika rehetra. Heveriko fa manelingelina ny mpanjifany ilay orinasa… ary mandoa izany. Tsy miaina mifanaraka amin'ilay antenaina napetrak'izy ireo tamin'ny fizotry ny varotra… izy ireo ilaina.
Vokatr'izany, ny orinasan'izy ireo dia tsy mitombo amin'ny tahan'ny fanombohana salama hafa. Ny mifanohitra amin'izay indrindra aza dia kivy ny ekipa mpanohana azy ireo, avo ny asan'ny mpiasa ary mijaly ny fitanana azy ireo. Ny famoahana rehetra dia mitondra fiasa vaovao kokoa izay miteraka olana sy fanamby vaovao.
Izany rehetra izany dia mitarika ny lazan'ilay orinasa ho tandindomin-doza. Nisalasala ny hanosika ireo orinasa ho any amin'ny lampihazo aho na dia hitako aza ny fahafaha-manao tsy mampino ao amin'ilay orinasa. Raha vantany vao tafaverina izy ireo ilaina, Tsy azoko antoka fa hipoaka ny fitomboany.
Amin'izao fotoana izao anefa, dia mamono azy ireo ny fanavaozana.